Maareeyaha garoonka diyaaradaha Beledweyne oo codsaday in la dayactiro garoonka – Radio Muqdisho
Maareeyaha garoonka diyaaradaha Beledweyne oo codsaday in la dayactiro garoonka
Maamulka garoonka diyaaradaha magaalada baladweyne ayaa dowladda dhexe ka codsaday in dayactir iyo balaarin lagu sameeyo garoonka diyaaradaha ee magaaladaas si uu howlihiisa u sii wato.
Maareyaha garoonka Maxamed Ibraahin ayaa sheegay in roobabku ay hakad galiyaan garoonka diyaaradaha, maadaama ay buuro waawayn ay ka sareeyaan garoonka, kuwaas oo soo roga daad hakiya shaqada garoonka.
“Saameyn wayn bay ku leeyihiin mar walba biyuhu, hadda roobkii ugu horreeyay ee ka da’ay Beledweyne laba toddobaad ayuu u xayirnaa garoonka” ayuu yiri.
Wuxuu intaa ku daray in uu jiro dadaal ay dowladdu ku dayactireyso garoonka Beledweyne, taas oo uu tilmaamay in ay wax badan u tari doonto bulshada degaanka oo ay kooxaha Al-Shabaab ka xireen jidad badan.
Dhinaca kale dadka ree Hiiraan ee ku sugan gudaha iyo dibadda ayuu maareeyuhu ugu baaqay inay ka qeyb qaataan dib u dhiska magaalada Beledweyne oo uu ku jiro garoonka diyaaradaha.
Safiirka Turkiga oo sheegay in mashaariic ay ka fulinayaan magaalada Beydhabo
Dhagayso Warka Subaxnimo 03.02.2014